Mendrika ny famoahana ve ny jus? | Martech Zone
Mendrika ny famoahana ve ny jus?
Alakamisy, Jolay 30, 2009 Alahady, Aogositra 23, 2009 Chris Lucas
Raha mbola tsy naheno momba ny Horizon Realty ianao dia manaova fikarohana haingana ao amin'ny Google dia hahita lahatsoratra vitsivitsy mahaliana ianao, toy ity lahatsoratra ity Mashable. Ho an'ny ambaratonga kely, ny mpanofa azy ireo taloha, Amanda Bonnen, dia nandefa tweet momba izany miaina anaty lasitra amin'ny iray amin'ireo tarika misy azy ireo. Horizon nametraka a fitoriana amin'ny $ 50,000 manohitra an-dRamatoa Bonnen. ankehitriny zava-misy bebe kokoa no hipoitra, fa misy lesona lehibe kokoa azo raisina eto fa tsy ny hoe afaka miverina manaikitra anao fotsiny ny haino aman-jery sosialy.
Lesona 1: Fantaro hoe iza no manana fahefana
Rehefa miditra amin'ny tany tsy fantatra ianao, na media sosialy, bilaogera, na media mahazatra aza dia zava-dehibe ny mahatakatra hoe iza marina no manana fahefana. Androany dia miharihary ny fihodinan'ny herinaratra fa tsy ny rehetra no mahazo azy. Izany no antony maha-zava-dehibe ny alohan'ny hanaovana ady imasom-bahoaka, na mieritreritra ny marina ianao, dia azonao ny fomba mety sy mety hilalaovan'ny hetsika. Azo inoana fa tsy mitazona ny karatra rehetra ianao, na eo aza ny eritreritrao.
Lesona 2: Aza mitondra antsy amin'ny basy
Hamarino tsara fa raha hamoaka lohahevitra misy ifandraisany amin'ny haino aman-jery sosialy ianao dia hahatakatra ny media sosialy. Hamarino tsara fa vonona ianao hampiasa ilay medium izay resahina mba hahazoana tombony. Raha tsy izany, rehefa misintona antsy an'io sy ny mpanohitra anao ianao, tena izy na tsia, mamaha basy dia ho gana mipetraka ianao.
Araka ny apetrak'ilay lahatsoratra Mashable, dia mety tsara:
Azontsika antoka fa very mihoatra ny $ 50,000 ny Horizon Realty tamin'ity valinteny Twitter ity. Izay no azonao rehefa manonona teny nindramina ianao? Izahay dia mitory aloha, mametraka fanontaniana any aoriana karazana fikambanana.?
Lesona 3: Makà torohevitra mety
Tsy miresaka momba izany aho torohevitra araka ny lalàna. Zava-dehibe kokoa amin'izao vanim-potoana iainanao izao ny fanananao olona iray azonao itodihana hanontany hoe "inona no tokony ho fantatro". Ho an'ny fikambanana lehibe kokoa dia zava-dehibe ny fanananao ny ekipa marketing sy PR anao eo ambony latabatra. Ho an'ny fikambanana kely kokoa dia mety a consultant amin'ny media sosialy, mpiara-miombon'antoka, na ny intern fotsiny aza. Na iza na iza izany dia alao antoka fa hahazo ny tena fahatakarana momba ny zavatra mety hitranga ianao, ny fomba tokony hamalianao ary inona ny vokatra mety hitranga.
Miova ny fifandraisana. Izay mety ho tantara kely teo an-toerana taona vitsivitsy lasa izay dia mety ho lasa vilom-pirenena ankehitriny. Hamarino tsara fa manana fahatakarana feno momba ny toa ny lalana ianao alohan'ny hidiranao amin'ny adim-pifandraisana.
Mametraka lanja amin'ny haino aman-jery sosialy miaraka amin'ny fizahan-tany
Miankina amin'ny Webtrends i Analytics World
30 Jul 2009 amin'ny 1:28 PM
Ohatra iray vao haingana amin'ity fiovana ity ny United Airlines nanapoaka ny mpitendry mozika Dave Carroll taorian'ny nanapahany ny gitara Taylor lafo vidy. Ny horonantsariny, "United Breaks Guitars" dia nalaza tampoka ary - raha toa kosa ny fihenan'ny $ 180M amin'ny sanda United dia azo lazaina ho lafo loatra - dia nitentina United ny fananana marika marika azo antoka.